Ma Dhabaa in Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi Ku Biiraayo Xisbiga Wadani |
Ma Dhabaa in Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi Ku Biiraayo Xisbiga Wadani
Gabiley(GNN)Labadii toddobaad ee u dambeeyay waxa la isla dhex marayay warar sheegaya in Xildhibaan Mahdi maxamed xaashi oo Ka Mida Golaha Deeganka Gabiley islamrkana Ka Soo Baxay Xisbiga Mucaaridka Ah ee ucid uu ku biiri doono xisbiga Mucaaridka Ah ee Waddani.
ilo wareedyo u dhuun daloola oo ka ag dhow-dhow Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi Ayaa noo xaqiijiyay inuu bilaha iyo asbuucyada soo socda ku biiraayo Xisbiga Wadani.
Dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaaya Warar iska soo daba dhacaaya ayaa sheegaya in Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi baryahaba wado hadalo hoos hoos ahi u socdeen Masuuliyiinta Xisbiga Mucaaridka Ah ee Wadani
Wararkan ayaa markii ay soo baxeen waxa ay noqdeen kuwo abuuray su’aalo iyo doodo badan oo ay bulshadu ku falanqaysay suurtogalnimada in Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi ka mid noqdo xisbiga mucaaradka ah ee Waddani.
Haddii ay rumowdo in Xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi uu ka mid noqdo xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ,waxa ay dadka siyaasadda odorosaa isku raacsanyihiin inuu marka koowaad si fudud ku heli doono taageerada Bulshada Gabiley ee Xisbiga Waddani.
xisbiga Waddanina u keeni doonaa guul isugu jirta gobalka Gabiley iyo taageero uu xisbiga Wadani uga soo hoyn doono gobalada Kale ee Somaliland oo uu ku leeyahay taageero, sumcad, Saxiibtinimada iyo Qadarinta Bulshada, isagoo Mar walba Ka Qayb Qaata Taakulada Dadka Danyarta Ah .